Nke a ise ukwu iri abụọ payline oghere si NextGen Gaming ndị mara mma na-egosi na oyi na-atụ, ọhụrụ ikuku na snowflakes. Ọ dịghị ekwe omume iji chọpụta abụọ yiri snowflakes ma ekele adịghị n'ime chilly egwuregwu ma ọ bụ na ọ gaara esote agaghị ekwe omume ike na-emeri combos. Nke a bụ egwuregwu dị na-egwu na No 1 Ohere mepere Sites.
Snowflakes na mepụtara NYX (NextGen) na dị igwu egwu na No 1 Ohere mepere Sites. NYX na NextGen Gaming na-mara maka eke ọdịnaya ọgaranya, elu-edu cha cha software. Nke a incorporates NextGen si ọhụrụ na egwuregwu aghụghọ gafee niile formats na NYX lọtrị, Bingo na cha cha modul.
Nke a bụ a ise ukwu ahịrị atọ oghere na-abịa na iri abụọ ofu paylines. Nke a oghere nwere ike Egwuru na No 1 Ohere mepere Sites. Nke a bụ egwuregwu dị na na na mobile, mbadamba na desktọọpụ site 30p ka £ 600 kwa atụ ogho. The-esi anwụde ndị uzo na-setịpụrụ megide chilly backdrop nke na-adọrọ snowy odida obodo n'okpuru a kpakpando ndị na-jupụtara igwe. Snowflakes na-ese n'elu mmiri ji nwayọọ n'ala-eru nso n'ala. Elaborately e mere snowflakes nke dị iche iche na agba na aghụghọ bụ ihe nnọchianya na-esi anwụde. A na friji Wild icon bụ anụ na ga-eji dochie ihe niile ime ka emeri combos. Otú ọ dị, ọ ga-eji dochie ikposa nke bụ a na friji ikposa icon.
The ọzọ na atụmatụ nke egwuregwu a na-agụnye:
Free spins- Ịkpalite a mma site na-atọ ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị multicolour ikposa icon. ị na-enweta 7 free spins maka 3 ikposa, 10 free spins maka 4 na akpatre, 15 free spins maka 5 chụsasịa. ọhịa akara pụtara na N'ezie nke a mma nọgidesie n'ihe ruo mgbe nke a bụ ihe. I nwekwara ike ịkpalite ọzọ spins site na-ọzọ ikposa n'oge feature.
oké wilds- A mma nwere ike rụọ ọrụ na-enweghị usoro mgbe ọ bụla atụ ogho. Onye ọ bụla ukwu na-agbakwunyere na ruo otu anụ icon inyere gị aka na ụfọdụ ukwuu Enwee Mmeri.
ọhịa Wind- Wilds na-kwukwara na a mma ahụ yiri nke oké wilds ma e wezụga ebe a ha na-kwukwara na oge nke atụ ogho kama na njedebe nke a atụ ogho.
A nnọọ mbara ikuku game, Snowflakes -abịa na-eju ndịna-emeputa, soothing soundtracks and many bonus features that you can aim for. It gives a high payout of about 96.58% na egwuregwu na dị na na na No 1 Ohere mepere Sites.